Mucaaridka Oo Ka Dareen Celiyey Wax Ka Beddelka Xeerka Ismaamulka Gobollada iyo Degmooyinka | Himilo Media Group
Mucaaridka Oo Ka Dareen Celiyey Wax Ka Beddelka Xeerka Ismaamulka Gobollada iyo Degmooyinka
Hargeysa, 11 Apr, 2019 (Himilo)-Xisbiga Ucid ayaa markii u horreysay ka dareen celiyey wax ka beddel golaha wakiilladu ku sameynayaan Xeerka Gobollada iyo Degmooyinka.
Xoghayaha Warfaafinta ee Xisbiga Mucaaridka ah ee Ucid Md Yuusuf Keyse Cabdillaahi, “Waanu soo dhaweynaynaa in tirada golaha Degaanka la yareeyo oo inta ay hadda sheegeen waliba laga sii yareeyo, balse waxaanu si cad uga soo horjeednaa in qodobka xasaanada xeer lambar 23 uu sheegayo in meesha laga saaro iyo waliba in Duqa iyo Ku xigeenkiisa la maamuuso oo la muuneeyo oo laga qaado xubnaha kale ee golaha degaankana laga dhigo magac u yaal, sababo badan awgeed”.
Yuusuf Keyse, waxa kale oo uu tilmaamay dhibaatooyinka uu arko inay ka dhalan karaan arrintaasi, “Haddii Golaha Wakiilladu arrintaasi (Wax ka beddelka Xeerka) ku kacaan waxaanu shacbiga uga sii digaynaa dhibaatooyinka ka dhalan kara oo ay ka mid yihiin, in Maayiradu wax kasta oo ay doonaan inay sameeyaan, iyo in Dimuqraadiyadii golaha degaanka dhexdiisu ay meesha ka baxdo, waxaanay keeni doontaa inuu meesha ka baxo isla xisaabtankii mudanayaashu dhexdooda iskula xisaabtamayeen”.
Dhinaca kale, Xoghayaha Warfaafinta ee Xisbiga Mucaaridka ah ee Ucid Md Yuusuf Keyse Cabdillaahi, waxa uu farriin u diray Mudanayaasha Golaha Wakiillada, “Golaha Wakiillada waxaan leeyahay waa in xubnaha Golaha Degaanka ay xasaanada u wada daayaan dhammaantood ama ay ka wada qaadaan ee aanay u dayn oo keliya Maayirka iyo ku xigeenkiisa.
Ugu dambayntii, hadalkan Xisbiga Ucid ayaa waxa uu daba socdaa markii toddobaadkan gudihiisa ay Guddiga Arrimaha Gudaha ee Golaha Wakiilladu ay golaha u soo gudbisay wax ka beddel iyo kaabis ay ku soo sameysay Xeerka ismaamulka Gobollada iyo Degmooyinka, kaasoo la filayo in maalmaha soo socda uu goluhu dood ka yeesho.